कोरोना महामारीमा किन बजाइँदैछ कर्मचारी चुनावको बेमौसमी बाजा ? - Nepal Face
कोरोना महामारीमा किन बजाइँदैछ कर्मचारी चुनावको बेमौसमी बाजा ?
२, आश्विन २०७७
काठमाडौं । देश कोरोना महामारीसँग जुझिरहेको छ । कोरोना महामारीमा ट्रेड युनियनको औचित्य नै छैन । यस बिषम परिस्थितिमा तोकिएको विधि, पद्धति, अवस्था र मितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुहुँदैन, हुँदेन । यदि भयो भने के हुन्छ ? दुर्घटना हुन्छ ।
यो बेला चुनाव होइन, छलफल, बहस, आन्तरिक संगठन निर्माण, गुनासा सम्बोधन, संगठनभित्र एकमाना एकता, संगठन एकीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता चुनाव हो त ? होइन । चुनाव राज्यको पनि आवश्यकता होइन हाम्रो पनि होइन, यो हुनुहुँदैन ।
ट्रेड युनियन चुनाव कहिले गर्ने नि, कि चुनाव गर्दै नगर्ने त ? चुनाव नगरी ट्रेड युनियन ब्याबस्थापन हुँदैन तसर्थ चुनाव आवश्यक छ तर यो समयमा होइन । यो जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने बेला हो । कोभिड–१९ को यस माहामारीमा कर्मचारीको चुनाव लोक हँसाउने मेलो मात्रै हो । सेवाप्रवाहको क्रममा राष्ट्रसेवकले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ, श्रद्धाञ्जली र समवेदना ब्यक्त गर्ने बेला हो, यो चुनावको बेमौसमी बाजा बजाउने बेला होइन ।
कहिले गर्ने त चुनाव ?
कोभिड समस्या न्यून भएपछि चुनाव गरौं । संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश ऐन र स्थानीय ऐन प्राप्त गरी सबै कर्मचारीको बृत्तिबिकास सुनिश्चित भएपछि चुनाव गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्नतिर लागौं । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा मतदाता र पद्धतिमा सहमति भएपछि चुनाव गर्दा त्यसको सार्थकता हुन्छ ।
समायोजनमा ट्रेड युनियनले आम कर्मचारीको सामुहिक हितमा भूमि खेल्न नसकी ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेका कारण गुमाउन पुगेको शाख र नैराश्यतालाई चिर्ने वातावरण तयार भएपछि निर्वाचन गर्दा केही बिग्रनेवाला छैन । सहकार्य गर्न सकिने र बिचार मिल्ने ट्रेड युनियनसग कार्यगत एकता सम्पन्न भएपछि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसको सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
हिजो जुन ढंगले हामीले नेतृत्व छनौट गर्यौं त्यसको समीक्षा हुनुपर्यो । उसले सम्बोधन गरेका कार्यभारको मुल्यांकन गरिनुपर्यो । सीबीए निर्वाचनपछिको नेतृत्व अगाडि नसारी चुनाव हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
अब के गर्ने त ? चुनावलाई केही समय सार्न खबरदारी र दवाब सृजना गर्दै संगठनभित्र र बाहिरको एकमाना एकता कायम गर्नेतिर लागौं । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा संगठनलाई सर्वोकृष्ट बनाउन थप क्रियाशील हुनुपर्छ ।
शुक्रवार, आश्विन २ २०७७०८:४४:५५
भारतसँगको सीमा विवादः विकल्प नम्बर तीनतिर जानु उचित होला ?
भारतीय सेनापतिलाई किन दिने महारथीको उपाधि ?
दुई महिनामै भित्रियो १६५ अर्ब रेमिट्यान्स
मुटुरोगीहरु किन कोरोनादेखि सतर्क हुनुपर्छ ?